कांग्रेस महामन्त्रीमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको भिडन्त ! कस्ले मार्ला बाजी ? – Butwal 24 News
कांग्रेस महामन्त्रीमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको भिडन्त ! कस्ले मार्ला बाजी ?
September 1, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on कांग्रेस महामन्त्रीमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको भिडन्त ! कस्ले मार्ला बाजी ?
काठमाडौं । कांग्रेसमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि आगामि २४ भदौमा महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन् । बिपी जयन्तीको अवसर पारेर शर्माले महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गर्ने तयारी गरेका हुन् ।
कांग्रेस प्रवक्ता, प्रचार विभाग प्रमुख र नेविसंघका सभापति भइसकेका शर्माले उम्मेदवारी घोषणा गर्ने तयारी गरेका हुन् । अर्का युवा नेता गगन थापाले महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि शर्माले पनि औपचारिक कार्यक्रम गरेरै १४ औं महाधिवेशनमा उम्मेदवारी घोषणा गर्ने तयारी गरेका हुन् । कांग्रेसमा योपटकदेखि महामन्त्रीका दुईवटै पदमा निर्वाचन हुँदैछ ।
‘म प्रवक्ताको जिम्मेवारी गर्नुपर्नेसहितका काममा व्यस्त भइरहेको छु । चाँडै महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दैछु’ शर्माले भने, ‘सम्भवतः वडा तहको अधिवेशन सकिएपछि २४ भदौमा महामन्त्रीमा मेरो उम्मेदवारी घोषणा हुनेछ ।’
गगन र विश्वप्रकाशबीच भिडन्त
महामन्त्रीमा भिड्नका लागि यसपटकदेखि दुई पद छन् । तर, दुई लोकप्रिय युवा नेता नै भिड्न लागेका हुन् । १३ औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा विजयी भएका डा. शशांक कोइरालाले १४१७ मत ल्याएका थिए ।
थापा ५८४ मत ल्याएर तेस्रो भएका थिए । अर्का उम्मेदवार अर्जुननरसिंह केसीले १०१७ मत ल्याएका थिए । उनै थापाले १४ औं महाधिवेशनमा पनि आफू फेरि महामन्त्रीमा लड्ने घोषणा १४ भदौमा गरेका हुन् ।
तर, यसपटक फेरि सिटौला प्यानल वा पूर्व संस्थापन कुन पक्षबाट भन्ने थापाले खुलाएका छैनन् । यद्यपी उनको पूर्व संस्थापनबाटै महामन्त्री लड्ने तयारी धेरै भएको बताइन्छ । पूर्व संस्थापनमा महामन्त्री भन्दा सभापति र उपसभापतिका दाबेदार धेरै छन् । दुई मध्ये एक महामन्त्रीमा थापालाई उठाउन सकिए यसले ठूलो राजनीतिक सन्देश दिने र सभापति, उपसभापति, महामन्त्री र केन्द्रीय सदस्यमा आफ्नो प्यानल बलियो बन्ने बुझाई पनि पूर्व संस्थापनपक्षीय नेताहरूको रहेको बताइन्छ ।
पौडेल पक्षमा सहमतिमा पदाधिकारीको उम्मेदवार तय गर्न नियमित रुपमा छलफल सुरु भइसकेको छ । पौडेल पक्षबाट सभापतिमा रामचन्द्र पौडेल, उपसभापतिमा प्रकाशमान सिंह र डा.शशांक कोइराला उम्मेदवार बन्न सक्ने बताइन्छ । यस्तोमा डा. शेखर कोइराला, डा. रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी र गगन थापामध्येबाट महामन्त्री र सहमहामन्त्री पनि मिलाउनुपर्ने हुन सक्ने बताइन्छ । डा. शेखर महामन्त्रीका उम्मेदवार बने महत र केसीमध्ये एक जना महामन्त्रीका अर्का उम्मेदवार बन्न सक्छन् । यस्तोमा गगन थापालाई सहमहामन्त्रीमा राख्न सकिने चर्चा पनि कांग्रेसमा सुरु भएको छ । तर थापाले महामन्त्रीबाहेक सहमहामन्त्रीमा सजिलै मान्ने अवस्था देखाएका छैनन् ।
मुख्य गरी कोइराला परिवारका डा. शेखर कोइरालाले आफू सभापतिमा उठेर गगनलाई महामन्त्री उठाउन चाहेका छन् । सहमतिमा उम्मेदवार चयन नभए संस्थापनका शेरबहादुर देउवालाई हराउन नसकिने बुझाई पूर्व संस्थापनको छ । त्यसैले पहिले जस्तो सिटौला समूहलाई बिच्किन नदिने पक्षमा पूर्व संस्थापन छ । १३ औं महाधिवेशनमा कृष्णप्रसाद सिटौलालाई मनाउन नसक्दा रामचन्द्र पौडेल सभापतिमा पराजित भएका थिए । आफ्नै समूहमा रहेका सिटौलालाई रोक्न नसक्नु आफूहरूको कमजोरी रहेको बुझाई पूर्व संस्थापनलाई अहिले पनि छ । यसैले सिटौला पक्षलाई आफूतिर तान्ने तयारीमा पूर्व संस्थापन पक्ष छ । रामचन्द्र पाैडेल सभापतिमा नउठ्दा गगनकाे महामन्त्रीकाे उम्मेदवार धेरे नै सहज हुन सक्ने बताइन्छ ।
उता गगनलाई महामन्त्रीका उम्मेदवार बन्न सहज छ । किनकी पूर्व संस्थापनमा सभापति र उपसभापतिका मात्रै दाबेदार धेरै छन् । महामन्त्रीका बलिया दाबेदार कम छन् । यता विश्वप्रकाश शर्मा १३ औं महाधिवेशनदेखि देउवा पक्षमा छन् । तर, देउवा टिमलाई महामन्त्रीको उम्मेदवारमा टिकिरहन भने धेरै सहज छैन । किनकी देउवा टिममा डा. प्रकाशशरण महत, ज्ञानेनद्रबहादुर कार्की र बालकृष्ण खाँण महामन्त्रीका बलिया दाबेदार हुन् । यस्तोमा विश्वप्रकाशको दाबेदारी पनि कायम भइराख्दा प्रभावशाली चार नेता हुनेछन् । यस्तोमा चारमध्ये दुई जनाको मात्रै नाम छनोट गर्न देउवालाई निक्कै सकस पर्ने देखिएको छ ।
विश्वप्रकाश कांग्रेस प्रवक्ता र कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख पनि हुन् । युवा नेताको रुपमा शर्मा पनि थापा जत्तिकै लोकप्रिय छन् । विद्यार्थी आन्दोलन र राजनीति दुवै उत्तिकै परिचित र चर्चित छन् उनी । यसर्थ अन्तिमसम्म चुनावी मैदानमा रहे महामन्त्रीको पदको लडाईं रोचक हुने देखिन्छ ।
देउवा पक्षको असजिलो मात्रै होइन । महामन्त्रीका दुई पदमा गगन र विश्वप्रकाश भिड्दा अरु दबाबमा आउनेछन् । दुई ठूला टिमबाटै गगन र विश्वप्रकाश उम्मेदवार बनाइए भने दुवै गुटका अरु दुई उम्मेदवार दबाबमा आउन सक्नेछन् । विश्वप्रकाश र गगन दुवै उत्तिकै लोकप्रिय रहेका आधारमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको भोट पाए देउवा र पौडेल पक्षका बलिया दाबेदारले पनि हार्न सक्ने जोखिम रहेका कांग्रेसका नेताहरू नै बताउँछन् ।
पार्टी व्यवस्थापन गर्न नसक्नेले देश बनाउँछु भनेर पत्याइँदैन : गगन थापा